Ukuveliswa kweMveliso yePolypropylene (PP-R) Imibhobho yaManzi ashushu naBandayo
Imibhobho ye-PP-R kunye nokufakwa kusekwe kwipolypropylene engacwangciswanga njengeyona nto iphambili eluhlaza kwaye iveliswa ngokungqinelana ne-GB / T18742. I-Polypropylene inokwahlulahlula ibe yi-PP-H (i-homopolymer polypropylene), i-PP-B (ibhloko ye-pololymer polypropylene) kunye ne-PP-R (i-copolymer polypropylene engahleliyo). Yenza ...
Izinto eziluncedo ngemibhobho yePVC
Imibhobho ye-PVC ithatha imibhobho ye-PVC-U yokuhambisa amanzi, enziwe nge-polyvinyl chloride resin njengeyona nto iphambili ekrwada. Ziyongezwa ngezongezo eziyimfuneko kwaye zenziwe ngokuqhubekeka kwe-extrusion. Yipayipi yokuhambisa amanzi enamandla aphezulu, uzinzo olungileyo, ubomi bexesha elide kunye neendleko eziphezulu ...
Ukusetyenziswa kombhobho we-PE
1. Umbhobho wezimbiwa we-PE Phakathi kwazo zonke iiplastiki zobunjineli, i-HDPE ineyona nto inxiba kakhulu kwaye iyabonakala. Ukuphakama kobunzima beemolekyuli, kokukhona inxiba into enganyangekiyo, ingaphezulu kwezinto ezininzi zesinyithi (ezinje ngentsimbi yekhabhoni, intsimbi engenasici, ubhedu, njl. Ngaphantsi kwe conditi ...